जापानको आनिमे बजार | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > CULTURE > जापानको आनिमेले विश्वलाई कसरि प्रभावित पारेको छ।
द ल्याण्ड अफ राइजिङ्ग सन, जापान जति टेक्नोलोजीमा विकसित छ त्यति नै व्यापक छ यसको पप कल्चर। विश्व युद्ध २ ले पूर्ण रुपमा जिर्ण बनाएको यो देशले द्रुत रुपमा आर्थिक मुहार मात्र फेरेन, संस्कृति र सम्पदामा पनि विश्वकै उदाहरण बनेर उभियो। अनेकौ ओमाचुरी, गेइस्य्या कल्चर, टी सेरेमोनी (ओसादोउ) जापानी संस्कृतीका केहि सामान्य उदाहरण मात्र हुन। हरेक समय जापान व्यस्त छ। मानौ व्यस्तता जापानीको फितरतमा छ। तर पनि जापानीहरुले आफ्नो कला र सम्पदालाई जुन उचाइमा पुर्याएका छन्, त्यो अरु देशको लागि पछ्याउन बाटो बनेको छ। कोचिएर ट्रेनमा चढ्नु होस् वा सुरुप्प आवाज निकालेर नुडल (मेन) खानुहोस् जापान एक शब्दमा भन्नु पर्दा भिन्न छ।
आज हामी हजुरहरुलाई जापानको पप कल्चरको एउटा पाटोको जानकारी गराउने छौ। त्यो पाटो हो आनिमे। आनिमे जापानको विश्वलाई एक बहुमुल्य उपहार वा योगदान बनेको छ। आनिमे भन्ने शब्द अंग्रेजीको “आनिमेसन” भन्ने शब्दबाट आएको हो। यो जापानमा त लोकप्रिय छ नै, विस्वको अनेकौ देशमा यसले अविस्मरणीय छाप छोडेको छ। यो यति लोकप्रिय छ कि, जापानमा घुम्न वा पढ्न आउनेहरुलाई जापान रोज्नुको कारण सोध्नु भयो भने आनिमेको देश भएर भन्ने उत्तर थुप्रै बाट पाउनु हुनेछ। मैले आनिमेकै कारण ले जापानी भाषा सिकेका र सिक्न खोजेका मानिसहरु थुप्रै भेटेको छु। जापानी आनिमेले समाजमा कस्तो प्रभाब परेको छ त ? यसले कसरि पश्चिमी संस्कृति र जापानी संस्कृतिलाई मेल गराएको छ त ? आजको हामि यहि प्रश्नको उत्तर केलाउनेछौ।
खासमा के हो त आनिमे ?
आनिमेले जापानिज सैली (स्टाईल) को आनिमेसनलाई जनाउछ। यो २० औ शताब्दीको सुरुवाततिर बाट आएको बताइन्छ। अहले आनिमे र यसकै किताबी कमिक भनिने “मान्गा” जापानमा धेरै सफल छ। आनिमे र मान्गा ब्यापारको कुल बजार मूल्य १५ अर्ब डलरको रहेको छ। आनिमे कार्टुन बच्चाहरुको लागि मात्र नभएर वयस्कमुखी पनि हुन्छ। अनिमेको टी भी सिरिज मात्र नभई फिल्म पनि बन्छ। भनौ आनिमेको दुनियाले हरेक उमेरको मानिसलाई लोभ्याउछ। स्पिरितेड अवे (२००१) , योर नेम (२०१६) केहि निकै पपुलर र ब्लकबस्तर आनिमे हुन।
आनिमेको चित्र कोराई कलाकार पिछे फरक पर्न सक्छ। तर पनि आनिमेको बेसिक क्यारेक्टर सजिलै छिन्न सकिने हुन्छ। ठूलो आखा, कलर गरिएको कपाल, सानो नाक र मुखले आनिमे क्यारेक्टरलाई पश्चिमी आनिमेसनबाट छुटाउछ। जापानी सबैले आफ्नो जिबनको कुनै न कुनै उमेरमा आनिमे हेरेका हुन्छन| क्यारेक्टरको चित्रण संगसंगै घत लाग्दो कथा लेखनले गर्दा आनिमे मननपराउने मानिस बिरलै हुन्छन। आनिमे ड्रामा, रोमान्स, हरर, साईन्स फिक्सन सबै जनराको हुन्छ। केहि अनौठा जनरामा साइबर पंक, मेचा(रोबोट) पनि पर्छन। पश्चिमीहरु जापानको आनिमेलाई मनोरंजनमात्र नभएर जापानी कलालाई अझ नजिकबाट बुझ्ने माध्यमले हेर्छन।
आनिमेले जापानलाई पारेको छाप
आनिमेमा जापानी संस्कृती दुरुस्तै उतारिएको देख्न सकिन्छ। कलेज वा हाई स्कुल साचिकैको जस्तो हुन्छन। क्यारेक्टरहरु चप्स्टिकले नै खान्छन। कतै जादा पनि जापानी सैलीको होटेल (रियोखान) मा बसेको देखाइन्छ। लोकप्रिय आनिमे क्यारेक्टरहरु जापानमा बच्चाको खेलौना, टि-सर्ट, कपि किताब वा अन्य एक्सेसोरिजमा देख्न सकिन्छ। कोको इचिबान्या भन्ने रेस्टुराण्टले आफ्नो खाना बच्चाहरु माझ लोकप्रिय बनाउन आनिमे सैलीको क्यारेक्टरनै बनाएका छन्।
A post shared by Oreki (@holytcbitu) on Apr 12, 2019 at 9:08am PDT
आनिमेको प्रभावले जापानमा एक भोकालोईड गाईका पनि बनाइएको छ। उनी हाचुने मिकु नाम गरेकी एक १६ बर्षीय कार्टुन क्यारेक्टर हुन। उनी साचिकैको मान्छे नभएता पनि उनको फ्यान फ़लोइङ्ग थुप्रै छन्। प्रशंसकहरु उनको लाइभ कन्सर्टपनि जाने गर्छन। धेरै बिजनेसहरु आनिमे क्यारेक्टरको मास्कोट बनाएर आफ्नो ब्यापार प्रोमोट गर्छन। थुप्रै भिडियो गेमहरु आनिमे सिरिजबाट बनाइएको छ। त्यसको एउटा उदाहरण पोकेमों हो। यो आनिमेको थुप्रै गेम बनेको छ। आनिमे जापानी पप कल्चरको अभिन्न अंग बनेको छ।
आनिमेले अरु देशमा छोडेको छाप
अहिले आनिमे जस्तो सुकै सैलीको कथा भन्ने एक लोकप्रिय मध्यम बनेको छ। पुरानो कार्टुनहरु धेरै जसो बच्चालाई लक्षितगरेर बनाइने हुनाले आनिमे सैलीले लोकप्रियता पाएको हो। अरु देशमा भने आनिमेले छाप छोडेको चाहि ड्रागोन बल, आस्ट्रो बोई, सेलर मुन एंड स्ल्याम डंक आएपछि हो। यी आनिमे हेरेपछि धेरै मानिसहरु जापानमा चासो राख्न थालेका हुन। जापानी भाषा पढ्ने रुचि पनि धेरैमा आनिमे हेरेर बढेको हुनाले १९८४ मा JLPT परिक्षा सुरु भएको हो।
A post shared by Avatar the last airbender (@the_last_airbender_avatar) on Apr 2, 2019 at 2:54am PDT
१९९० को सुरुवाती तिर आनिमे बुम भएको थियो। यहि लोकप्रियताले गर्दा आनिमे कन्भेनसन सुरु भएको थियो। यी कन्भेनसनहरु केहि दिन लामो हुन्छन। यहाँ विस्वका आनिमे र मान्गा फ्यानहरु आउछन। फ्यानहरु आनिमेको मर्च्यानडाईज किन्ने र कसप्ले गर्छन। कस्प्ले भनेको आनिमे क्यारेक्टर को जसरि मेकअप गरि, कपडा लागाई त्यहि क्यारेक्टर जस्तै बन्नु हो। अहिले कसप्ले आनिमेमा मात्र नभएर हलिउड मुभी, कार्टुन, कमिक, भिडियो गेममा पनि देख्न सकिन्छ। आनिमेको क्यारेक्टर चित्रण गर्ने सैलीबाट प्रभावित भई पश्चिमी आनिमेसनमा पनि त्यस्तै सैली देखिन्छ। अबतार – द लास्ट एर बेण्डर तेसैको उदाहरण हो।
आनिमे जापानमा जन्मिए पनि यसले विश्वमै आफ्नो अतुल्य छाप राखिसकेको छ। अर्बौको बजार, करोडौ फ्यान र लाखौ क्रिएटरलाई आनिमेले मेल गराएको छ। पर्यटन वृद्धिमा पनि अमुल्य भूमिका खेलेको जापानको आनिमे मानब कलाको सुन्दर उदाहरण हो।